>ငယ်ဘဝမှ မှတ်မိသောကဗျာများ | ချမ်းလင်းနေ
Filed under: စုံစီနဖာ, တက်ခ်ပိုစ် — 13 Comments
ကဲ့သို့သော ကဗျာလေးများကို ကျောင်းခန်းထဲမှသူငယ်ချင်းများနှင့်အတူတကွရွတ်ဖတ်ခဲ့ကြရသော စာအံသံများသည် ယခုထိတိုင်ကျွန်တော်နားထဲတွင်စွဲမြဲစွာကြားနေရပါသေးသည်။ ထိုကဗျာလေးများအထဲမှ ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံး ကဗျာလေးကတော့ –
နောက် အတန်းတွေကြီးလာပေမယ့်လည်း နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း မြန်မာစာ သင်ရိုးညွန်းတမ်းစာအုပ်ထဲမှာ “ကဗျာ” ကတော့မပါမဖြစ် အရေးပါသူလေ။ကဗျာဆိုတာကတော့ ကျောင်းသားဘဝမှာ ရွတ်ဆိုလို့ကောင်းရင် စိတ်ထဲစွဲကျန်ရောပဲလေ။ စာသင်ကျောင်းသားဘဝကတော့ သင်ခဲ့ရတဲ့ ကဗျာတွေကအများကြီးပါပဲ။တချို့ကဗျာတွေကိုတော့ အခုထိမှတ်မိတယ်။တချို့ကဗျာတွေကတော့ မေ့ပြီဗျာ။ကြီးတော့ စာတွေဘာတွေ ပြန်ဖတ်တဲ့အခါ တချို့ကဗျာလေးတွေကိုတွေ့မှ ဒီကဗျာလေးကတော့ ငါငယ်ငယ်က သင်ခဲ့ဖူးပါရဲ့ ဆိုပြီးပြန်မှတ်မိတာ။ငယ်ငယ်က သင်ခဲ့ရသောကဗျာရေးတဲ့ ကဗျာစာဆိုတွေထဲမှာတော့ လူဦးမင်း နှင့် ဖိုးသူတော်ဦးမင်းတိုနှစ်ဦးကိုတော့ အတော်ကိုကြိုက်မိပါရဲ့ဗျာ။ သူတို့နှစ်ဦးက တစ်ဦးက စာခံတဲ့ကဗျာကို တစ်ဦးက မရမကကဗျာဖွဲ့ပြီး စာအုပ်တော်မူကြတဲ့ တစ်ခေတ်ထဲပေါ်ခဲ့တဲ့ ကဗျာကဝိနှစ်ဆူပေကိုး။သူတို့ရေးတဲ့ကဗျာတွေထဲက ဒီကွမ်းအကြောင်းစပ်တဲ့ ကဗျာလေးကိုတော့ မှတ်မိသေးသဗျ။လူဦးမင်းစာခံတဲကဗျာမှာ-
ဒီလို နန်းတော်တွင်းမှ ဘုရင်စားကာထွေးသည့် ကွမ်းအရောင်ကို ကြည့်ရင်းစပ်တဲ့ လူဦးမင်းရဲ့ ကဗျာကို ဖိုးသူတော်ဦးမင်းက တောဓလေ့ ရွာသူရွာသား သူဆင်းရဲများစားသော ကွမ်းအရောင်ဖြင့် ပြန်လည်ချေပကာ စာအုပ်ပုံကတော့ –
>ကိုချမ်းလင်းနေကလိမ္မာတယ်ထင်တယ်။ ဗန္ဓုလမခံဘူးကွရန်သူလာရင် ရှေ့ကိုတိုးအမြဲတမ်းထိုင်ရှိခိုး တို့လိုကဗျာတွေ မဆိုဘူးထင်တယ် :o)
>ဟီးးးးးး ဘယ်ကဗျာလေးတွေမှ သိပ်မမှတ်မိလို့ပါ။
>ကိုနေလင်းရေလာဖတ်သွားပြီနော်…ကိုနေလင်းရွတ်ခဲ့တဲ့ ကဗျာလေးတွေကို သိသွားပြီ…ရေးပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးနော်….
>ကိုချမ်း က ဒီလိုကဗျာတွေပဲ ရွတ်ခဲ့တာလား။ လိမ္မာလိုက်တာ။ 😛 မငုံတို့တော့ ပေါက်တတ်ကရအော်ခဲ့တာလေး ဖော်ကောင်လုပ်နေတယ်။ ကိုချမ်းရေးမှပဲ ငယ်က ကဗျာကောင်းလေးတွေကို လွမ်းသွားတော့တယ်။
>ကိုချမ်းရေ… ငယ်ငယ်က ကဗျာလေးတွေ ပြန်လာဖတ်တယ်။။ ဟိဟိတစ်ခုမှ မမှတ်မိတော့ဘူး။ငယ်ငယ်က ကျောင်းမှာရွတ်ခဲ့တာတွေ ပြန်သတိရတယ်။
>ကားဆရာ ကိုလှသောင်းအရက်မူးပြီး အရမ်းမောင်း….အဆိုတော် ကိုကော်ပီသံစဉ်ခိုးပြီး သူဆိုသည်သူ့အခ္ဂေ သူများကူးသူကျေနပ်ပါဘူး….ဟူး..အသစ်တ္ဂေလေ….(နာမည်တူရင်ခ္ဂင့်လွှတ်ပါ..မည်သူ့ကိုမျှမရည်၇္ဂယ်ပါ..)
>အခု ဒီခေါင်းစဉ်နဲ့ လိုက်ဖတ်နေတာ ကိုချမ်းလင်းနေ ငယ်ငယ်က ကဗျာတွေက မြင့်လှချည်လား…း)
>မင်္ဂလာပါ။ စာလာဖတ်သွားပါတယ်။ ရွှေစွန်ညိုမှာ ချောင်းငယ်ရေနဲ့ အရင်ဆေးပါတယ်၊ ပြီးတော့ မြစ်ငယ်ရေ နောက်ဆုံးမှ ပင်လယ်ရေနဲ့ ဆေးပါတယ်။ ချောင်းငယ်ရေနဲ့ မြစ်ငယ်ရေက နွေမှာ ခမ်းပေမယ့် ပင်လယ်ရေက ဘယ်တော့မှ မခမ်းတဲ့အတွက် အဲဒါနဲ့ အဆုံသတ်တာ ဖြစ်တယ်။
>အဲဒုတိယ မနင်းဗျ။ အဟီး။သူရေးတာနဲ့တင် ကုန်ရော။ ဘာမှကို မကျန်တော့ဘူး။ နောက်မှာ ငဇော်တစ်ယောက်ကျန်သေးတယ်ဆိုတာ စဉ်းစားမပေးကြဘူးဗျာ။ ဟင့်။ =(
>ရေးသွားလိုက်တဲ. ကဗျာတွေဗျာစုံစေ.နေတာဘဲဗျာ ကျောင်တုန်းကကဗျာတွေ လည်းကုန်ပါပြီ :Pမနှင်းကြီး တဂ်ထားတာ ညီကရေးစရာကိုမကျန်တော.ဘူးဗျာ 😦
>ငယ်ငယ်တုန်းက ဘ၀ကို ပြန်သတိရလိုက်တာ။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အုပ်စုလိုက် ရွှေစွန်ညိုလုပ်တမ်းကစားတာတွေ မှတ်မိသွားတယ်။ ကိုချမ်းရေးတဲ့ ကဗျာတွေက ငယ်ဘ၀ကို တစ်ခေါက်ပြန်ရောက်သွားသလိုပဲ။ နောက်လည်း စာတွေ လာပြီး အားပေးဖတ်ပါ့မယ်။ ခင်လျက်
>ဟီးးးး ပြောမယ် စိတ်မဆိုးနဲ့ ရဲသားကြီးက ကိုလှဖေ လူဆိုးရိုက်လို့သေ ဟားးးဟားးး ငယ်ငယ်က ဆိုခဲ့တာလေ မှတ်မိသေးတယ် စိတ်မဆိုးဘူးနော် အခုလိုပြောတာ ဟီးးး ခင်လို့ စ သွားတယ်နော် ဘိုင် လာလည်တာ ကျေးဇူးနော် တာ့တာ
>To Verse »